Maxaad Ka Taqanaa Shimbirka La Yiraahdo Gorgor? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Waa qoraa ka tirsan TukeSomalism. Wuxuu wax ka qoraa luuqadaha kala duwan sida Soomaali, Carabi, Ingiriis iyo Sawaxili, wuxuu ka faalooddaa Arimaha diinta Islaamka, deegaanka, wadaniyada, suugaanta iyo arrimaha bulshada. Qaatay shahaadada Bachelor-ka ee Shareecada iyo Qanuunka (Sharia and Law), Diploma –Maamulka, Maareynta Ganacsiga iyo Dhaqaalaha. Diploma –Cilmiga Deegaanka iyo caafimaadka.